Fandefasana amin'ny Linux mampiasa DLNA | Avy amin'ny Linux
Miaraka amin'ny fisehoan'ny fahitalavitra afaka izany mamaky atiny amin'ny Internet, manokana amin'ny alàlan'ny DLNA. Tsy maintsy atao ny manao kely ny PC servidores amin'ny fisie mba hahafahana mijery azy mivantana avy amin'ny fahitalavitra (horonan-tsary, sary, mozika sns.) .Raha manana fahitalavitra na fitaovana hafa manohana DLNA ianao dia reraky ny mamindra ireo rakitra ao anaty kapila ianao USB, ity misy vahaolana.
Voalohany indrindra famaritana fohy ny DLNA. DLNA (Digital Living Network Alliance) dia fikambanan'ny mpamokatra elektronika sy solosaina nifanaiky hamorona karazana fenitra mifanaraka amin'ny rafitr'izy ireo rehetra. DLNA dia mamela ireo fitaovana samihafa mety ho ao anatin'ny tambajotra iray ihany hifanerasera hifampizara atiny samy hafa. Ny tombony azony omena dia ny fametrahana mora sy ny fahaiza-miasa. Ity rafitra ity dia afaka miasa amin'ny tambajotra Wi-fi sy Ethernet.
Eto aho dia manolotra vahaolana mandeha ho azy tanteraka, misy ny fampiasana lozisialy MiniDLNA. Ny fizarana fampirimana ary ny zavatra rehetra ao anatiny dia hita taratra amin'ny solosaina ao amin'ny tambajotra. Mila milaza fotsiny ilay rindrambaiko fampidinana tianao izahay mba hitahiry ny zava-drehetra ao anaty lahatahiry zarainay. Miasa amin'ny Linux ity programa ity ary maimaim-poana.
Izahay dia manatanteraka ireto baiko manaraka ireto ho faka:
apt-get -y mametraka install-tena ilaina apt-get -y mametraka libavutil-dev libavcodec-dev libavformat-dev libflac-dev apt-get -y mametraka libvorbis-dev libid3tag0-dev libexif-dev apt-get -y mametraka libjpeg62- dev libsqlite3-dev
Avy eo dia mila misintona ny kaody loharano miniDNLA, esory izy ary atambaho:
./configure ataovy izay hametrahana installer linux / minidlna.init.d.script /etc/init.d/minidlna chmod 755 /etc/init.d/minidlna update-rc.d minidlna default
Raha vantany vao tafapetraka dia manamboatra azy io amin'ny alàlan'ny fanovana ny rakitra /etc/minidlna.conf
ary hanombohana azy
Ny fametrahana azy io ho serivisy, raha averintsika indray ny solosaina dia hanomboka irery ny MiniDLNA. Tsy misy zavatra hafa tokony hatao.
loharanom-baovao: Teknisiana Linux
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Fandefasana amin'ny Linux mampiasa DLNA
Canuteiro dia hoy izy:
Rehefa avy nanandrana Mediatomb, Minidlna, Ushare. Ary manana olana arivo sy iray hanamboarana azy ireo tsara, ny sasany dia vitako ny nanao azy, rehefa ela niady tamin'ny fisie configurations, raha tsy noho ny zavatra iray dia ho an'ny iray hafa, ny hafa kosa tsy nomeko azy ireo akory miseho amin'ny fahitalavitra Samsung-ko.
Saingy hitako ny RYGEL, ao amin'ny ivon-toeran'ny rindrambaiko izy io, apetraka amin'ny plugins rehetra io, ary dia izay. Natao ny "application rygel configur" ho anao, rehefa manokatra azy ianao dia mahazo varavarankely hisafidianana ireo lahatahiry tianao zaraina (amin'ny toerana misy anao dia efa nisafidy ireo lahatahiry multimedia anao ianao) ary menio mitete-midina anao hisafidianana ilay karazana ny fifandraisana (wlan0, eth0 sns ...) omenao hamonjy ary mandeha tsara ny zavatra rehetraeeeeee.
Rehefa avy niady tamin'ny 3 teo aloha dia toa hafahafa tamiko ny tsy nahazoan'izy ireo zavatra tsotra, miaraka amin'ny tsindry 3 dia efa azonao ampiasaina izany. ary aza mandeha manodidina ny fanovana ireo rakitra fikirakira raha tsy lasa adala ianao.
Ary ny zavatra lehibe dia zara raha misy fampahalalana momba azy ao amin'ny pejy amin'ny Espaniôla.
Mamaly an'i Canuteiro
Salama, nametraka ny rygel aho ary napetraka ny safidin'ny rygel. Inona izao no ataoko mba hilalaovana ireo rakitra ao amin'ny tamba-jotra? Inona ny programa ampiasaiko? Vaovao aho ary mazava sy tsotra ny fanazavana. Misaotra betsaka
alister dia hoy izy:
Ireo fitaovana mifanaraka amin'ny DLNA dia tsy mila zavatra toy ny "programa". Raha manana fahitalavitra afovoany ianao, ohatra, ao anaty menus mitovy dia hahita safidy ianao hamantatra ireo mpizara DLNA, fidirana amin'ny rakitrao ary alefaso. Mety manana anarana hafa izy ireo, saingy izany fampahalalana manokana izany, anjaran'ny mpanamboatra anao ny mamaha izany ary manome anao ny antsipiriany. Tsy afaka manome valiny mahazatra ianao, tsy misy dikany izany.
Valio i alister
Misaotra nametraka an'i Rygel tao amin'ny Debian aho ary tonga lafatra izany! Efa nanary fanantenana aho fa afaka mijery ireo rakitra multimedia amin'ny fahitalavitra.
Tongasoa ianao, champ.
Louis mena dia hoy izy:
Salama Nametraka an'i Rygel aho hizara ireo sarimihetsika voatahiry ao amin'ny kapila mangirana faharoa (pc) ary tsy misy fomba ahitanao ilay fampirimana avy amin'ny mpandray (Android). Mampiseho ahy ireo lahatahiry izay tonga amin'ny alàlan'ny default (mozika, horonan-tsary ary sary), saingy tsy hitako io fampirimana io amin'ny kapila mafy hafa. Misy mahalala ny mety ho olana? Misaotra anao!
Valiny tamin'i Luis Rojo
Dario Soto dia hoy izy:
tsy mamaky ahy ny avi izy ...
Valiny tamin'i Dario Soto
havaozy libavcodec, libavformat, libav rehetra, andao
3 ny fanontaniana
inona no atao hoe -y amin'ny mety?
Manampy ahy hizara ireo lahatahiry ao anaty tamba-jotra ihany koa izany toa ny avy any samba no anaovako azy?
Amin'ity fanaingoana ity dia hitako ny atiny multimedia avy amin'ny console toy ny ps3 na 360?
ny -y dia hoe valio foana ny fanontaniana rehetra momba ny baiko
Ahoana ny fomba fametrahana sy fikirakira ny PS3 Media Server?
Edel dia hoy izy:
Mamorona rindranasa hamoahana an'izany rehetra izany aho satria afaka mampiasa azy amin'ny php.
Mamaly an'i Edel
Any Manjaro - Arch misy mahalala ny fomba hanaovana azy?
mitady AURs ho an'ny rygel fa azo antoka fa manana ianao
tsy misy configure alohan'ny hanaovana 😉 #trolling
raha tsy izany, tonga lafatra! misaotra an'ny manualillo
Ampiasao izay tianao indrindra dia hoy izy:
Manoratra an'ity fanehoan-kevitra ity aho, ka raha misy manana olana mitovy amin'ny fampiasana dlna ao amin'ny smartvizany toa ahy tany am-piandohana tamin'ny kde plasma, satria tao amin'ny linux mint dia tsy nanana olana tamin'ny fampandehanana ilay application aho, fa nifindra monina mba hividy ny fahombiazany ny tolotra dia ampifandraiso amin'ny kde ny telefaoninao amin'ny fotoana rehetra amin'ny usb, wifi na amin'ny hostpot.
Izaho dia nanana olana tamin'ny fahazoana mihazakazaka rygel ao amin'ny plasma kde, na dia taorian'ny andrana maro aza dia nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny fampiharana amin'ny fomba maro izy, toy ny terminal, ny pejin-tranonkala, ary amin'ny alàlan'ny fikarohana na ivon-rindrambaiko.
Miaraka amin'ny rindrambaiko mpitantana fonosana muon izay apetrakao amin'ny alàlan'ny kde plasma, ny motera fikarohana dia mitady rygel ary misintona ny fonosana rehetra miseho ary vonona ny hihazakazaka rygel ary hampiasa ny fahitalavitra fahaizanao. izay fanampiana ilain'izy ireo soratana wg000050@gmail.com
Ny fampiasana minidlna sy rygel dia miorina amin'ny vokatra mitovy amin'izany, hanovana minidla dia mila mampiasa nano ianao fa tsy amin'ny rygel dia hisy ny varavarankely izay mora ampiasaina ary manapa-kevitra ianao hoe aiza ny lahatahiry aseho sy ny karazana tambajotra mifandray. wlp3s0
Mamaly amin'ny fampiasana izay tianao indrindra